२५ जेष्ठ २०७६ शनिबारको राशिफल::Best News Experience from Nepal
२५ जेष्ठ २०७६ शनिबारको राशिफल
शनिबार, जेष्ठ २५, २०७६
मेष– समस्याको समाधान पत्ता लाग्नेछ । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षमा हुनुहुनेछ । पढाई प्रति ध्यान कम जानेछ । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । अनावस्यक खर्चमा थोरै कमि आउनेछ । सहयोग सहानुभुति मिल्नेछ । भोज भतेर एवं सभा सम्मेलनमा भाग लिने निम्तो आउन सक्छ ।
वृष– मन भ्रान्ति हुनसक्छ । शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । उपलब्धिका काममा अवरोध आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । संचित धन नास हुनसक्छ । व्यर्थको घुमाई बढि हुनेछ । व्यापारमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । आफन्तबाट नै विरोधीको व्यवहार हुनसक्छ । परिश्रमको मुल्य पाईने छैन । आस्था र विश्वास घट्नेछ ।
मिथुन– सामान्यतया दिन अनुकुल देखिन्छ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रो हुनेछ । घर परिवारमा सुख,शान्ति मिल्नेछ । कार्य लगनशिलता बढाउनु होला । प्रयत्न गरेमा उधारो रकम उठ्नेछ । सहयोग गर्ने पनि भेटिने छन् । प्रलोभनमा पारेर फाइदा लिन खोज्दै छन् सतर्क रहनुहोला ।
कर्कट–असहज स्थितिबाट सहज स्थितिमा प्रवेश हुनेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ । गुमेको विश्वास पलाउनेछ । कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । सहयोगी हात भेटिने छन् । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ ।
सिंह– समयले पूर्ण साथ दिने छैन । तर स्वास्थ्यमा सुधार एवं तनावमा थोरै कमि आउनेछ । आन्तरिक भन्दा बाह्य र फाईदाका भन्दा घाटाका काम बढि हुनेछन् । आशा र भरोसामा काम गर्दा पछि परिनेछ । पढाईमा रुची बढ्नेछ । धार्मिक क्रियाकलपमा सक्रियता बढ्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
कन्या– दिन प्रतिकुल बढि देखिन्छ । आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुनेछ । काम गर्ने वातावरण खलबलिनेछ । दुर्जनहरुको सक्रियता बढ्नेछ भने सहयोगी हात पन्छिने छन् । दैनिका काममा समस्या आउन सक्छ । मानसिक तनावमा वृद्धि हुनसक्छ । खर्च बढ्नेछ । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ ।
तुला– दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला सपनाले साकार रुप लिनेछ । प्रयत्न गर्नु होला नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । पुरानो विवादको टुङ्गो लाग्नेछ । दैनिका काम काजमा प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावनाहरु देखिनेछन् । जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण कामहरु हुनेछन् ।
वृश्चिक–संघर्षको बाटो तय गर्नु होला सहज रुपमा केहि काम हुने छैनन । कार्य क्षेत्रमा शत्रुहरुको आगमन हुनसक्छ सुरक्षित हुनुहोला । अरुको भर विश्वासमा काम गर्नु भयो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुक्नेछन । व्यापारमा सामान्य सुधार आउनेछ । राजनीति तथा नोकरीमा बढि तनाव हुनसक्छ । प्रतिश्पर्धाबाट टाढा नभाग्नु होला ।
धनु– दुविधा बढ्न सक्छ । समयमा निर्णय लिन सकिएन भने उपलब्धि गुम्न सक्छ । लेनदेन कारोवारमा समस्या आउन सक्छ । इच्छाशक्ति मरेर आउनेछ । वोलीको अनर्थ लाग्न सक्छ । आफन्त पराई हुनसक्छन् । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । शैक्षिक तथा वैदेशिक कार्यमा आँशिक सफलता मिल्नेछ ।
मकर– शारीरिक एवं मानसिक थाकान बढि हुनेछ । आवेगमा आएर कुनै काम नगर्नु होला क्षति बढि हुनसक्छ । आफ्नो धन खर्च गरेर अरुलाई सहयोग गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । विवादबाट टाढा बसेर काम गर्नु होला । झुट्टा कुराले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । संचित धन घट्नेछ । मन विसाउने चौतारी मिल्ने छैन ।
कुम्भ– उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । थोरै प्रयत्न गर्नु भएको खण्डमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । धार्मिक काममा धन खर्च हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार,साथी भाइबाट सहयोग मिल्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा विचार पु¥याउनु होला ।
मिन– कुटनैतिक विधि अप्नाएर काम गर्दा बढि उपलब्धि हात लाग्नेछ । आर्थिक कारोवारमा सामान्य सुधार आउनेछ । वोलीको प्रभाव थोरै पर्नेछ । प्रयास र प्रयत्नहरु सफल हुनेछन् । परिश्रम अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफा कम हुनेछ । पढाई लेखाईमा त्यति ध्यान जाने छैन । साझेदारले दुःख दिन सक्छन् ।
बुटवलबाट संचालित प्रदेश ५ को लोकप्रिय अनलाइन अखबार न्यूज डटकम २०७४ पौष ७ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।
आज ३ असोज २०७६ शुक्रबारको राशिफल
आज – ०२ आश्विन २०७६ बिहिवार को राशिफल
आज – ०१ आश्विन २०७६ बुधवार को राशिफल
आज – ३१ भाद्र २०७६ मंगलवार को राशिफल
आज -३० भाद्र २०७६ सोमवार को राशिफल
२९ भदौ, २०७६ – आइतवार – आजको राशिफल
प्रभातफेरि तथा प्रबचन कार्यक्रम सम्पन्न
सुर्य भुसाल अर्घाखाँची । संविधान दिबसको अबसरमा प्रभातफेरि तथा प्रबचन कार्यक्रम...
कालो पट्टी बाँधेर संविधानको विरोध गर्ने ६ जना पक्राउ
दाङ । टाउँकोमा कालो पट्टी बाधेर संविधानको बिरोध गर्ने ६ जनालाई...
सम्मान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
सुर्य भुसाल अर्घाखाँची । देउराली यातायात अर्घाखाँची प्रालि अर्घाखाँचीको आयोजनामा सबारि चालक,सहचालक...
पाणिनि बहुमुखि क्याम्पको शुभकामना आदान प्रदान सम्पन्न
सूर्य भुसाल अर्घाखाँची । पूर्व बिद्यार्थि समाज पाणिनि बहुमुखि क्याम्पस को महत्त्वपूर्ण...
साउदीको नेतृत्वमा यमनमा हवाई कारबाही
साउदी । साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेनाले शुक्रबार बिहान यमनको...
बेवारिस शव फेला
दाङ। लमही नगरपालिका ७ उचानिम्बुस्थित सामुदायिक वनमा शुक्रबार एक महिलाको बेवारिस...
दसैँ तिहार आउँदै गर्दा खसी बोकाको मूल्य बढ्यो
दाङ । दसैँ तिहार आउँदै गर्दा दाङ, प्यूठान र कर्णाली प्रदेशको सल्यान...
बालिका करणी आरोपमा पक्राउ
रुकुम। रुकुमपश्चिममा बालिकालाई जबर्जस्ती करणीको प्रयास गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका...
प्रदेश ५ सरकारको पदक पाउनेको नामावली सार्वजनिक
बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ३५...
चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थित गर्दै प्रदेश सरकार
बुटवल ।प्रदेश ५ सरकारले चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई सहज बनाउने गरी यातायातको व्यवस्थापन...
अध्यक्ष: राजेन्द्र ढकाल
सम्पादक/ कार्यकारी प्रमुख: रमेश पोख्रेल
अतिथि- सम्पादक: प्रेेेम सुनार
सह- सम्पादक: रिया सेन
जगिलाल थापा- रुपन्देही
रविन्द्र गुप्ता- भैरहवा
सिर्जना घिमिरे – पाल्पा
रुद्रमणि भुसाल – अर्घाखाची
पहलमान घर्ति – रोल्पा
माधव बेल्वासे – कपिलवस्तु
लिलाधर वली – दाङ
राधिका भुसाल – प्युठान
अखबार न्युज मिडिया प्रा. ली.
फोन नम्बर : 9851077301
© 2017 Akhabar News All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology